I-China DAM1 Series Thermal Overload Operation Molded Case Circuit Breaker (Uhlobo oluLungisiweyo) mveliso kunye nabenzi | IDaDa
ISekethe yoKhuseleko lweZithuthi (MPCB)
I-DAM1 Series UkuSebenza ngokuBanzi ngokuSebenzayo ukuSebenza kweMeko yeSekethe yoBume (Uhlobo oluLungisiweyo)
Idilesi: Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
Abaphuli beesekethe zeThermal-Magnetic
Umsebenzi wokukhusela i-Thermal: (Ukukhusela phantsi kweemeko zomthwalo)
I-Bimetal, ebonelela ngokhuseleko lwe-thermal, iqulathe ukudityaniswa kweesinyithi ezimbini ezinee-coefficients ezahlukeneyo phantsi kobushushu. Xa i-bimetal ishushu, iyagoba isinyithi ngokungandiswa kancinci. Ngale ndlela, inotshi encedisa ukuvulwa kwendlela yokwaphula ikhutshwa ukukhubaza ikhefu. Isantya sokuguqa kwe-bimetal sihambelana ngokuthe ngqo kunye nobungakanani bokudlula kwangoku ngekhefu. Kuba, ukwanda kweendlela ezikhoyo ngoku kukonyusa ubushushu. Ngale ndlela, ngaphezulu kokhuselo lwangoku lomsebenzi wesaphuli uzalisekiswa yi-bimetal kwimithwalo yemithwalo ephezulu kuneyona ikhoyo ngoku
Umsebenzi wokhuselo lweMagnetic (Ukukhusela phantsi kweemeko ezimfutshane zesekethe)
Omnye umsebenzi wesaphuli kukukhusela isekethe exhunyiwe kwiisekethi ezimfutshane. Ukujikeleza okufutshane kunokubakho ngenxa yokunxibelelana kwezigaba kunye okanye ukunxibelelana nomgangatho wesigaba. Ukusukela ukuba umjelo ophakamileyo kakhulu uza kudlula kwiintambo kwimeko yesekethe emfutshane, amandla enkqubo kufuneka aphulwe ngexesha elifutshane ngenxa yokhuseleko lwe-thermal. Breaker kufuneka enze ukuvulwa kwangoko ukukhusela umthwalo oxhunywe kuwo. Inxalenye ezalisekisa lo msebenzi yindlela yokuvula esebenza ngozibuthe obubangelwa yimagneti
Indawo eyenziwe ngumbane wesekethe omfutshane
Ukufakwa ngokulula okuzimeleyo kwezixhobo ezincedisayo:
Phantsi kokukhutshwa kwamandla ombane;
Indlela yokusebenza yokubamba;
Indlela yokusebenza yombane;
Zoba isixhobo ;.
• Iseti esemgangathweni yekhefu nganye yesekethe ibandakanya iibhasi zebhasi okanye ii-lugs zekhebula, isahluli sesigaba, iseti yezikrufu kunye namandongomane okufakwa kwiphaneli yokufaka.
• Ngoncedo lwesibambiso esikhethekileyo iiyunithi ezili-125 nezili-160 zingafakelwa kuloliwe kaloliwe we-DIN.
• Ubunzima kunye nobukhulu babaqhekezi beesekethe baphantsi nge-10-20% ngaphantsi kwaloko kucetyiswe ngabanye abenzi bamakhaya. Le nyani ibonelela ngokufaka iibhokisi ezincinci kunye neepaneli. Ngaphandle koko, ubukhulu obuncinci benza ukuba kube lula ukutshintsha ii-breakers zakudala zibe yi-DAM1.
Iimeko zeesekethe ezibunjiweyo zecandelo lesiphaluka esisezantsi. Bayazifezekisa iimfuno zofakelo lwabasebenzisi abancinci yonke indlela eya kutshintsho olukhulu lweshishini kunye neenkqubo zokuhambisa amandla. Zihlala zisetyenziswa kwiindawo zokusila zentsimbi, amaqonga eoyile, izibhedlele, iindlela zikaloliwe, izikhululo zeenqwelo moya, amaziko ekhompyutha, izakhiwo zeofisi, amaziko endibano, iithiyetha, izakhiwo zezakhiwo, kunye nezinye izakhiwo ezinkulu.
Iiparamitha zombane zeDAM1 MCCB Ityala leSekethe eliBunjiweyo
Uhlobo lwe-MCCB olusisigxina-olushushu
10 - 12,5-16-20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 -125 - 160 (150) A
Icu:Uvavanyo lwe-Ot-CO (O: Ukuqhuba ngokuvula, i-CO: Ukuvula-vula ukuvula, t: Ukulinda ixesha)
Iimpawu:Uvavanyo lwe-Ot-CO-t-CO (O: ukuqhuba ngokuvulekileyo, i-CO: ukuSebenza ngokuVulekileyo, vula ixesha lokulinda)
ON / I Isikhundla: Ibonisa ukuba abafowunelwa ngekhefu bavaliwe. Kule ndawo, i-lever breaker ikwindawo ephezulu
Indawo yoHAMBO: Ibonisa ukuba ikhefu livuliwe ngenxa yayo nayiphi na intsilelo (ngaphezulu komthwalo okanye isekethe emfutshane). Kule meko, i-breaker lever ikwindawo ephakathi phakathi kwe-ON kunye ne-OFF. Ukuze uthathe i-breaker, esendaweni yokuhamba, uye kwi-ON position; Cinezela i-lever breaker ezantsi njengoko kubonisiwe luphawu lwe-OFF
Isaphuli siza kucwangciswa ngesandi "cofa" Emva koko, tsala i-lever njengoko kubonisiwe luphawu lwe-ON ukuvala ikhefu.
OFF / 0 Indawo: Ibonisa ukuba abafowunelwa ngekhefu bavulekile. Ngale ndlela, ikhefu eliqhekezayo likwisikhundla esisezantsi.
Iiparamitha zomzimba ze-DAM1-125 MCCB Ityala leSekethe eliBunjiweyo
Udidi (EN 60947-2 / IEC 60947-2)
Iipropati ze-Dielectric (V)
Umgama wedwa (mm)
I80 / 0 ※
Ubungakanani beMCCB Case Case Breaker Breaker
Egqithileyo I-DAM1 Series yeThermal kunye neMagnetic Adjustable Type Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
Okulandelayo: I-DAM3-160 MCCB Icandelo leSekethe eliBunjiweyo
4 Pole Mccb weSekethe Breaker
I-Mccb 250 A
I-Mccb 300 A
DAM1 Series Electronic Uhlobo oluxonxiweyo Case Circui ...
DAM1 Series Thermal And Magnetic Uhlobo Adjustable ...